Ogaden News Agency (ONA) – YAHOO oo Xaqiijisay In La Jabsaday Emaillada Macaamiisheeda.
YAHOO oo Xaqiijisay In La Jabsaday Emaillada Macaamiisheeda.
Shirkada YAHOO ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa markii ugu horeysay xaqiijisay in la jabsaday 500 milyan oo kamid ah Emailada macaamiisheeda.
Kooxo aan la shaacin haybtooda ayaa lasheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2014 ay jabsanayaan Serverka Shirkada YAHOO, macada sababta keentay inay muddo intaas la eg ku qaadato shirkada YAHOO inay arrintan ogaato ama shaaciso.
YAHOO oo dacwad u gudbisay hay´ada danbi baarista Maraykanka ee FBI ayaa sheegtay in kooxda falkan geysatay ay taageero ka helayeen dowlad shisheeye oo aan magaceeda la shaacinin.
Xogta laga xaday shirkada YAHOO waxaa kamid ah; ciwaanada Emailada, Furayaasha Emailada, Su’aalaha sirta ah iyo jawaabahooda. Dadka emailada ku leh shirkada YAHOO ayaa lagula talinayaa inay bedalaan Furayaasha ay ku furtaan emailadooda iyo xogtooda ugu kaydsaneyd YAHOO.
Arrintan ayaa dhabar jab weyn ku ah maamulka shirkada YAHOO oo hada dadaal ugu jiray in lacag gaareysa $4.8 bilyan oo dollar shirkadaasi Yahoo uga iibiyaan shirkada weyn ee lagu magacaabo Verizon Communication.